Hiram-pirenena gasy sy frantsay | Tokinao
« Ireo mpitondra hafatra - Les messagers | Main | Lalao : Mitady feom-behivavy :-) 14/08/08 »
Hi hi - vao hitako tao amin'ny forum ity fanadihadiana ity.
Marina aloha araka ny heviny e ! Fa ny fahitako azy dia ny firafitry ilay "tononkalo" no tian'ilay olona nolazaina.
Posted by: pissoa at 2008/07/26, 11:23
tsy azoko ...
pissoa > mba azavao hoa fa mety ho izaho 'zany no tsy mahazo resaka :)
Posted by: Tokinao at 2008/07/26, 11:27
Tsy haiko koa ka fa ilay izy nanao ohatra hoe
Ry Ta ni ndra za nay ma la la ô, Ry Ma da ga si ka ra soa.
A llons en fants de la Pa tri e, Le jour de gloi re est ar ri vé !
(Hi hi - ilay e @ Patrie io mantsy toa tena tenenina raha tsy diso aho.)
Io no nahatonga ahy nieritreritra an'izany. hi hi hi
Posted by: pissoa at 2008/07/26, 11:41
Posted by: Tokinao at 2008/07/26, 13:00
Ny fahavalo tiany lazaina eto tsy ny Anglisy raha tamin'ny andron'ny revolisiona fa ny mpanjaka sy ny mpanaradia azy "royalistes". Heverina ho fahavalon'ny revolisionera tamin'izany fotoana. Araka ny fijeriko azy ihany anefa izany/
Posted by: jentilisa at 2008/07/26, 13:08
oaay ! lasa soavaly mena mihazakazaka ny curseur-ko.
Posted by: CrazyHorse at 2008/07/26, 14:24
jentilisa > marina tokoa ny anao. Tamin'ny taona 1792 tokoa no noforonina izy ity (izany hoe nifandraika t@ révolution), ary efa taon-jato maro talohan'izany no nialàn'ny fanjakana anglisy teto Frantsa (1429).
Ny mba mahatsikaiky ahy fotsiny dia ny hoe : maninona io hira io no noraràn'i Napoléon tamin'ny fotoan'androny, nefa izy no nahazo tombony indrindra tamin'ny revolisiaona :).
Manarak'izany, mahatsikaiky koa ny fizotran'ny tantara : Ny "extreme droite" frantsay ankehitriny dia mangataka ny fanovàna ny fetim-pirenena frantsay mba hifanandrify amin'ny fandresena ny Anglisy. Etsy andaniny anefa dia indraindrainy koa ity "la marseillaise" (izay mariky ny revaolisiaona) ity ho fanevan-dry zareo :).
Posted by: Tokinao at 2008/07/26, 16:23
aiza klou le sovaly menamena izany e, efa ela izy iny izay tsy hitako !
Ny ahy ny feony indray no hitako mitovitovy satria ilay sofiko tsy mba sofina mahay mozika ka rehefa miara-miakatra sy miara-midina dia mitovitovy amiko :-P
Posted by: ikalamako at 2008/07/26, 23:50
Ikalamako--> ka le soavaly matahotra mozilla 'ko :).
Ikalamako, Pissoa-->iny resaka "feon-kira" iny no tsy tao an-tsaiko. Tsy aleo ve ny votoatiny no tena jerena e! Raha samy hijery ny "endriny" ihany ("forme" fa tsy "fond") : Ny zana-tany frantsay fahiny hafa aza ange ka amin'ny teny frantsay ny hiram-pireneny e!
Ohatra fotsiny : ireo firenena "afrique noir" (cameroun, togo, mali, tchad, Burkinafaso,...), Canada (izay "bilingue" ny azy).
Tsy hoe tsy manana ny tenim-pireneny akory izy ireo, fa tsy hainy ny niaro ny teniny. Ireo mpitondra antsika kosa mba niady (ary tena niady) hahatonga ny teny malagasy mba haharitra hatramin'izao fotoan'andro iainantsika izao.
Tsy aleo ve mba jerena ihany ny lafin-tsaran-javatra indraindray e! Sady tsy i Madagasikara ihany koa ange no hany firenena eto amin'izao tontolo izao ity e! Tsy maintsy mba nandinika ireo an'ny hafa rehetra isika.
Aiza moa no nahalalantsika an'izay hamorona hiram-pirenena raha tsy noho ny fifandraisana tamin'ny tany ivelany (laFrantsa sy ny Angletera).
eritreritra ka alefa e :-)!
Posted by: Tokinao at 2008/07/27, 19:11
:-) ny feony hitako nitovitovy fotsiny no nolazaiko kah, fa ny hiram-pireneko maha-saro-piaro ahy kah. Nitovitovy fa tsy hoe nitovy ange e (resaky ny tsy manana argument ny ahy satria tena tsy nohalaliniko loatra ilay izy, fa patriotisme fotsiny ny ahy, lol)
Posted by: ikalamako at 2008/07/27, 22:31
misy fanakavahana mihitsy eto amin'ny aterineto kle. Tonga dia hitany ve hoe mozilla no ambasadera-ko ato dia laviny. tssss
Posted by: ikalamako at 2008/07/27, 22:33
ikalamako-> izay alo de marina e! Tsy mbô navelanareo hitsidika anareo ilay soavaly kely fa dia ampitahorinareo @ mozilla hihihi.
Tena "discrimination positive" tsotra 'izao :-P.
Posted by: tokinao at 2008/07/29, 20:12
Refa otr'reny dia ataovy hoe: mitovy ny lohan'la hahaha
na hoe zany nga no betsaka any :)
Posted by: simplex at 2008/07/29, 22:25
simp > mampme mits nareo zany :)
Posted by: tokinao at 2008/08/08, 08:10